ဩဂုတ် ၃၁ ရက် နောက်ပိုင်း အာဖဂန်နိုင်ငံ၌ တပ်ချထားရေး ဆွေးနွေးနေဆဲဟု သမ္မတဘိုင်ဒန်က ပြောကြား - Xinhua News Agency
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့ ကဘူးလ်လေဆိပ်တွင် ပြည်ပထွက်ခွာရန် စောင့်ဆိုင်းနေသူများအား ဩဂုတ် ၂၂ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန် ၊ ဩဂုတ် ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်က အာဖဂန်မှထွက်ခွာရေး နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ဖြစ်သော ဩဂုတ် ၃၁ ရက် နောက်ပိုင်းတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၌ ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်အတွက် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဆက်လက်ချထားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဩဂုတ် ၂၂ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိအာဖဂန်တွင် ဆောင်ရွက်နေသော ကယ်ဆယ်ရေး အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးအခြေအနေကို သမ္မတအိမ်ဖြူတော်၌ တနင်္ဂနွေနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရှင်းလင်းပြောကြားစဉ် ဘိုင်ဒန်က အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်တာကတော့ ဆက်ပြီး မတိုးဖို့ပေါ့ ၊ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ နဲ့ စစ်တပ်အကြား ဆွေးနွေးမှုတွေ ဆက်လုပ်နေပါတယ်” ဟု နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက် (ဩဂုတ် ၃၁ ရက်) အလွန်ကာလနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းမှုအပေါ် ဘိုင်ဒန်က ဖြေကြားခဲ့သည်။ “ ဒါပေမယ့် ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေကြပါတယ် ၊ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်ကြာကြာဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေရအုံးမလဲဆိုတဲ့အပေါ် ကျွန်တော်သံသယရှိပါတယ် ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ သမ္မတဘိုင်ဒန်သည် ပြီးခဲ့သော ဇူလိုင်လက အမေရိကန်စစ်တပ်အား အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် စစ်ဆင်ရေးအစီအစဉ်အားလုံးကို ယခုလ(ဩဂုတ်) လကုန်တွင် အပြီးအပြတ် အဆုံးသတ်ရန် အမိန့်ပေးထားသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၌ ဩဂုတ် ၁၅ ရက်တွင် ကဘူးလ်မြို့တော်အား တာလီဘန်တို့က ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်လိုက်ချိန်မှစ၍ အမေရိကန်သည် အာဖဂန်နိုင်ငံရှိ ၎င်း၏ နိုင်ငံသားများ နှင့် အာဖဂန်မိတ်ဖက်များကို နိုင်ငံအတွင်းမှ ကယ်ထုတ်ရန် အပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
အမေရိကန်စစ်တပ်သည် ပြီးခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း ခန့်မှန်းခြေ လူပေါင်း ၃,၉၀၀ ခန့်ကို အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအပြင်ဘက်သို့ ကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီး ဩဂုတ် ၁၄ ရက်မှ စတင်ကာ အမေရိကန် နှင့် မဟာမိတ်အပေါင်းအပါ လေယာဉ်များက အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှ လူပေါင်း ၂၈,၀၀၀ ကျော်ကို ကယ်ထုတ်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် သမ္မတဘိုင်ဒန်က အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဖဂန်သို့ရောက်ရှိနေသော သူ၏နိုင်ငံသားများကို ကဘူးလ်လေဆိပ်ဝင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရေဆွဲနေကြောင်း နှင့် လေဆိပ်အနီးတစ်ဝိုက်ကို ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဇုံအဖြစ် ဆက်လက်တိုးချဲ့ထားကြောင်း ဆိုသည်။
မြေပြင်တွင် လုံခြုံရေး အခြေအနေသည် လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ “အပြစ်မဲ့အာဖဂန်ပြည်သူတွေ ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ အခြေအနေကို ပေါက်ကွဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိပါတယ် ” ဟု ဘိုင်ဒန်က ဆိုသည်။ ထို့ပြင် ဒေသတွင်း အစ္စလာမ်မစ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်သော ISIS-K မှ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်လာမည့် အလားအလာများ ခြိမ်းခြောက်ခံနေရကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနေ့အစောပိုင်းတွင် အမေရိကန်ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်က ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်များကို ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ရန် စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းများကို ညွှန်ကြားထားသည်။
အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin က အမေရိကန်ထောက်ပို့တပ်ဖွဲ့၏ တပ်မှူးအား “ အရပ်ဖက် အရန်လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့(CRAF)ကို လှုပ်ရှားမှု အဆင့် ၁ သို့ မြှင့်တင်ရန်” အမိန့်ပေးထားပြီး အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှ ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်ကို ထောက်ပံ့ရေးအတွက် စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်း အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြုရေး စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန် ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ် သတင်းပြန်ကြားရေးမှူး John Kirby က ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင်ကြေညာချက်ထဲတွင် စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းများအနေဖြင့် ကဘူးလ်လေဆိပ်အထိ ပျံသန်းပြေးဆွဲရန် မလိုအပ်အပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ စစ်လေယာဉ်များကသာ ကဘူးလ်မြို့အဝင်အထွက်ပျံသန်းမှုများကို အလေးထားလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စီးပွားဖြစ်အရပ်ဖက်လေကြောင်းလိုင်းများအနေဖြင့် “ ယာယီခိုလှုံရေးစခန်များ နှင့် ခရီးတစ်ထောက်နားအခြေစိုက်စခန်းများသို့ ရောက်ရှိနေသော ခရီးသွားများအတွက် နောက်ထပ်ရှေ့ဆက်သွားမည့်နေရာများကို ဆက်လက် ပို့ဆောင်ပေးရန်အတွက်သာဖြစ်ကြောင်း” ကြေညာချက်တွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းမှာ အမေရိကန်သမိုင်းတွင် အရပ်ဖက် အရန်လေကြောင်းတပ်ဖွဲ့(CRAF)ကို တတိယအကြိမ် ပါဝင်လုပ်ဆောင်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်အရ သိရသည်။ ပထမအကြိမ်အဖြစ် ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲ နှင့် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် အီရတ်စစ်ပွဲတွင် (CRAF) ကို အသုံးပြုခဲ့ရဖူးကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, Aug. 22 (Xinhua) — U.S. President Joe Biden said on Sunday that extending troops deployment for the evacuation mission in Afghanistan beyond the Aug. 31 deadline has been under discussion.
“There are discussions going on among us and the military about extending, our hope is we will not have to extend,” said Biden when asked about the Aug. 31 deadline. “But there are going to be discussions, I suspect, on how far along we are in the process.”
The president also noted the security environment is changing rapidly on the ground. “We know that terrorists may seek to exploit the situation and target innocent Afghans or American troops,” he said, pointing to potential terrorist threats from ISIS-K, the local affiliate of the Islamic State.
Secretary of Defense Lloyd Austin had ordered the Commander of U.S. Transportation Command “to activate Stage I of the Civil Reserve Air Fleet (CRAF),” which provides the Pentagon access to commercial air mobility resources to support evacuation from Afghanistan, Pentagon Press Secretary John Kirby said inastatement.
The statement added that the commercial planes would not fly into Kabul airport. U.S. Military aircraft will focus on operations in and out of Kabul, and commercial planes “will be used for the onward movement of passengers from temporary safe havens and interim staging bases.”
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Baghlan ပြည်နယ်ရှိ ခရိုင်များမှ တာလီဘန်များကို တာလီဘန်ဆန့်ကျင်ရေးသမားများက တိုက်ခိုက်နှင်ထုတ်